Iyo nyowani yakapusa Yakachengeteka Tourism Seal ndiyo kiyi yekuita kuti vashanyi vadzoke
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Iyo nyowani yakapusa Yakachengeteka Tourism Seal ndiyo kiyi yekuita kuti vashanyi vadzoke
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • dzidzo • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Investments • LGBTQ • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Yakachengeteka Tourism Seal
Zviri nyore, zvinobudirira, uye zvakasarudzika. Kutangwazve kweiyo Yakachengeteka Tourism Seal Chirongwa neWorld Tourism Network. WTN inotarisira kuti Sefa Yekushanya Yakachengeteka ive muyero mutsva wepasirese mukutsvaga kwainoenda, hotera, nevamwe vanobatana vakachengeteka kune vashanyi.
Chirongwa cheNew Safer Tourism Seal chirongwa neWorld Tourism Network chakatangwazve muna Chikunguru 1. Chirongwa chakamiswa muna Ndira kuti vadzidze kutyisidzira kweCOVID-19 kumabhizimusi ekushanya nekushanya.
Iyo yakasvibira, bhuruu, uye tsvuku Yakachengeteka Tourism Seal inoratidza majekiseni emishonga, bvunzo zvinodiwa uye kesi mareti. Iyo ine zvese zvakapusa maturusi ekuva iwo mutsva muyero weyese kuyerwa. Yakagadzirirwa kudzosa bhizinesi kumashure uye kuwana chivimbo chemufambi, kwaanoenda uye nevashandi.
Iyo Yakachengeteka Tourism Seal yenzvimbo dzekuenda uye vanobatika ikozvino yave kuwanikwa kune nhengo dzeWorld Tourism Network, sangano riri kusimbisa kuvaka patsva, kufambisa hurukuro yekutanga yepasirese nezve COVID-19 nevatambi vekushanya neyekushanya vanobata pamwe nenzvimbo.
Kuchengetedzwa kwekufamba uye kuchengetedzeka kunoenderana neese anopa uye anogamuchira, uye zvinotora hutungamiriri. Kuziva chokwadi ichi, Kuvakazve Kufamba ndiyo yekutanga hurukuro yepasirese nezvekutyisidzirwa kwe COVID-19.
Iyo yakavambwa na eTurboNews, Yakachengeteka Tourism, PATA, ari African Tourism Bhodhi, Uye Nepal Tourism Bhodhi padanho rekukanzurwa kweITB Trade show muBerlin munaKurume 8, 2020. ITB haina kumboitika, asi iyo kuvakazve kufamba kwekudya kwekuseni kwaive kutanga kweanopfuura mazana maviri++ zoom hurukuro nevabatanidzwa pasi rese.
Dr. Peter Tarlow kana Vakachengeteka Tourism vakayambira nezve ichibuda COVID-19 Dambudziko paSafer Travel yekutanga chiitiko mune vhidhiyo meseji yakanyorwa muna Kukadzi 2020.
Muna Zvita wa2020, Kuvaka zvakare.travel akagadzira iyo Izwi Yekushanya Network (WTN), sangano rekubatanidza rine nhengo dzinosvika chiuru nemazana mashanu emabhizimusi ekushanya nekushanya munyika zana nemakumi maviri nenomwe
WTN yakagadzira iyo Yakachengeteka Tourism Seal yekuenda uye yekufambisa uye yekushanyirwa indasitiri vanobatana muna Chikunguru wa2020 Jamaica Tourism Board ndiyo yaive yekutanga kuenda yakapihwa chisimbiso muna Chikunguru 9, 2020, ichiteverwa neKenya Tourism Board.
apo WTTC yakazivisa zvinopfuura zana zana zvakagashira chitambi chakachengeteka chekushanya, World Tourism Network yakafunga mushure mekuumbwa kwayo kuisa iyo Yakachengeteka Tourism Seal bata wakanyarara kubvumira kunzwisiswa kwakajeka kwe COVID-19 uye kutyisidzira kune vashanyi neindasitiri yekushanya.
Nekuunzwa kwechirongwa chekudzivirira, uye kurekodha kutaridzika kuri kubuda mumisika mikuru inosanganisira Hawaii, iyo World Tourism Network yakafunga kutangazve Safer Tourism Seal zvakare muna Chikunguru 1, 2021, gore rimwe chete mushure mekugadzirwa kwayakaitwa.
Sachigaro uye muvambi weWTN Juergen Steinmetz akati: "Zvakakosha kuti isu tigadzire chirongwa chinogona kunyatso kuwana chivimbo chemufambi, kwavanoenda, vanobatana navo, uye nevaya vanoshandirwa munzvimbo ino yepasirese.
“Isu hatina maresiphi ekuti tiwane ongororo yakadzama. Ini ndinofunga iyo WTTC Stamp yakaita basa rakakura mukubatanidza yakadzama dhata uye yaive nevatambi vanochengeta vatore zvinhu zvemitemo yavo kwavanoenda kana kambani, kuti vagone kugamuchira kubvumidzwa kweWTTC. Takatora chirongwa cheHawaii Chekufamba Kwakachengeteka semuenzaniso, uye meseji yedu yakapusa. Kubaya nhomba, kuyedza, uye kupararira kwehutachiona ndiwo manhamba atinogona kuyera tisati tapa Sefa Yekushanya Yakachengeteka.
”Chitambi cheWTTC nechisimbiso cheWTN zviri kurumbidzana. Sezvineiwo, kambani yega yega inokodzera kuwana chisimbiso chedu kutanga inofanirwa kunyorera yeWTTC stamp yechipiri. Kwese kwainoenda kana kambani inotakura chitambi cheWTTC ingangoda kunyorera chisimbiso chedu chinotevera. WTTC meseji inoenderana neruzivo rwebhizinesi kana kwairi kuenda, isu tiri kungo tarisa pane izvozvi mamiriro uye mhedzisiro.
"Izvi zvinoita kuti zvido zvekushanda munzvimbo yakachengetedzeka zvazadzikiswe, usati waita basa nezvinyorwa zvidiki."
“Tinofanirwa kuva nechivimbo chekuti chero munhu anotambira chisimbiso chedu anokwanisa kusimudzira kushanya kubva pano. Unogona kuva nezvose zvine chekuita nehotera kushanda panzvimbo, asi kana kwauri kuenda kusati kwakachengeteka, zvese izvi hazvina basa zvakanyanya.
"Nevevashanyi vezuva nezuva vanosvika kuHawaii, ayo akakwirira achienzaniswa nemazuva epamusoro mu2019, kunyangwe pasina kufamba kwenyika, Hawaii yakaonekwa semuenzaniso wekubudirira. Muenzaniso weHawaii wakachengetedza munhu wese muHurumende nevashanyi vakachengeteka.
“Tinonzwa takasununguka kuvimba nezvenyaya yekubudirira iyi muHawaii uye kuve nemapoinzi akakosha emhando yeHawaii akabatanidzwa mune zvatinoda zveSafer Tourism Seal zvine musoro. "
Iyo Yakachengeteka Tourism Seal (STS) inovaka pane yakasimbiswa zvitupa kuburikidza nekuwongorora uye zvibvumirano. Chisimbiso chinopa zvimwe zvivimbiso kana uchifamba panguva dzino dzisina chokwadi. STS inobatsira kwavanoenda nevano pinda navo kuburikidza neyakaenzana mapoinzi-poindi yekutarisa yemamiriro azvino munzvimbo yako yebhizinesi.
Iyo Yakachengeteka Tourism Seal inongowanikwa chete kune nhengo dze World Tourism Network. The Yakachengeteka Tourism Pass kune vafambi, iyo Magamba Mubairo inowanikwawo kune chero munhu.
Zvakasiyana nezvimwe Seal kana Stamp endorsements, iyo World Tourism Network Yakachengeteka Tourism Seal ine chinhu chiri nyore chinodiwa zvichibva pamishonga yekudzivirira, zviyero zvekuyedza, kupfeka-mask, mitemo yekuparadzanisa munharaunda, uye nhamba dzehutachiona hweCOVID dzakabatanidzwa nekuzviongorora kubva kune avo vanonyorera Yakachengeteka Tourism Seal.
WTN inopa zvisimbiso zvitatu:
CHIMWE CHITSAUKO Chakachengeteka Chekudyara
inowanikwa kunzvimbo uye vanobatika. Izvo zvakanyatsoenderana nekuzviongorora kwako uye paZVINHU zvezvinotevera zvidiki zvinodiwa kune kwauri kuenda
1) 25% yekudzivirira huwandu hwehuwandu hwevanhu
2) Negative COVID-19 bvunzo kana nhomba inodiwa pakuuya kwevashanyi
3) Yako-yemazuva manomwe kesi chiyero pavanhu zviuru zana vanofanirwa kuve vashoma pane vapfumbamwe paavhareji pazuva.
4) Mask kupfeka
5) Kufambidzana munharaunda.
Iyo BHUU Yakachengeteka Yekushanya Seal
Iko kuongorora kwakavakirwa pane kwako kuongorora uye pane CHIMWE chezviitiko zviviri zvinotevera:
1) Kwako kuenda kunofanirwa kuve ne50 +% yekudzivirira huwandu hwehuwandu hwevanhu VAKO uye vashanyi vako vanofanirwa kuratidza kuzara kuzere kana isina kunaka COVID-19 bvunzo usati wasvika munyika mako, nyika, kana dunhu UYE wako 7- zuva kesi reti pa 100,000 huwandu hwevanhu husingasviki manomwe pazuva; mask-akapfeka mukati uye munharaunda kure
2) KANA kwaunoenda kunofanirwa kuve neiyo 60 +% yekudzivirira mwero uye yako manomwe- zuva rezviyero zvemari pavanhu zviuru zana zvinoda kuve zviri pasi pe7 paavhareji zuva nezuva
3) Kusiyana Kwemagariro
Iyo RED Yakachengeteka Tourism Seal
kuongororwa & kubvumidzwa:
Zvichienderana neyako yekuongorora yakatsigirwa neWTN nyanzvi dzekuchengetedza uye nhengo dzeWTN uye zvese zvinotevera:
1) Kwako kuenda kunofanirwa kuve neiyo 70 +% yekudzivirira huwandu hwehuwandu hwevanhu
2) 7- zuva rezviyero pamwero wevanhu zviuru zana pasi pe100,000 zuva nezuva
WTN nyanzvi timu inokwanisa kugadzirisa zvinodiwa zvichibva pane yakazvimirira dhata uye kuongororwa.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Yakachengeteka Tourism Seal, uye kunyorera enda ku www.musaiforil.com